မိဘနှစ်ပါးကို ရည်စူးပြီး ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်အလှူ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မြကေသီအောင် - Pissaya News
သရုပ်ဆောင် မြကေသီဟာ မိခင်နှစ်ပါးကို ရည်စူးပြီး ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်အလှူ တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလှူနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ အခုလိုရေးထားပါတယ်။
“လပြည့်နေ့လေး ကိုယ့်ဘုန်းဘုန်းကျောင်းမှာ အပါးနဲ့အမေ့တွက်ရည်စုးပြီး ဝါဆို သင်္ကန်း ကပ်…ဘုန်းဘုန်းများနဲ့ ဧည်သည်စားဖို့ ထမင်းကြော် ပွဲ၃၀, ပူတင်းဗူး၅၀, မြန်မာမုန့်မိူးစုံ,ဆနွင်မကင်းနဲ့ကန်ဇွန်းဥ ကျောက်ကျော(သူငယ်ချင်းကလုပ်ပေး)လေးတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ဒါနပြုခဲ့တယ်. သမီးလုပ်ပေးသမျှ ကုသိုလ်တွေအားလုံး အပါးနဲ့အမေ ရောက်ရာဘုံဘဝက သာဓုခေါ်နိင်ပါစေ..ချစ်တဲ့ သမီးကြီး လွမ်းနေပါတယ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက် နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
မြကေသီအောင်ဟာ အခုဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေအပြင် သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို ဦးဆောင်နေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မိဘနှဈပါးကို ရညျစူးပွီး ဝါဆိုသင်ျကနျးကပျအလှူ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ သရုပျဆောငျ မွကသေီအောငျ
သရုပျဆောငျ မွကသေီဟာ မိခငျနှဈပါးကို ရညျစူးပွီး ဝါဆိုသင်ျကနျးကပျအလှူ တဈခုပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အလှူနဲ့ပတျသတျပွီး သူမရဲ့ ဖဘှေ့တျစာမကျြနှာမှာ အခုလိုရေးထားပါတယျ။
“လပွညျ့နလေ့ေး ကိုယျ့ဘုနျးဘုနျးကြောငျးမှာ အပါးနဲ့အမတှေ့ကျရညျစုးပွီး ဝါဆို သင်ျကနျး ကပျ…ဘုနျးဘုနျးမြားနဲ့ ဧညျသညျစားဖို့ ထမငျးကွျော ပှဲ၃၀, ပူတငျးဗူး၅၀, မွနျမာမုနျ့မိူးစုံ,ဆနှငျမကငျးနဲ့ကနျဇှနျးဥ ကြောကျကြော(သူငယျခငျြးကလုပျပေး)လေးတှေ ကိုယျတတျနိုငျသလောကျဒါနပွုခဲ့တယျ. သမီးလုပျပေးသမြှ ကုသိုလျတှအေားလုံး အပါးနဲ့အမေ ရောကျရာဘုံဘဝက သာဓုချေါနိငျပါစေ..ခဈြတဲ့ သမီးကွီး လှမျးနပေါတယျ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖဘှေ့တျစာမကျြ နှာမှာ ရေးသားထားပါတယျ။
မွကသေီအောငျဟာ အခုဆိုရငျ အနုပညာအလုပျတှအေပွငျ သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးကို ဦးဆောငျနသေူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။
သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကတော့ ကလောမြို့ ကို မိသားစုတွေနဲ့ အတူ ခရီးထွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “နှစ်၁၀၀ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့…ကလောဘူတာ” ဆိုပြီး မိသားစု ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ မိုးအောင်ရင်က...
Uncategorized ပြည်တွင်းအနုပညာသတင်း အနုပညာ
အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုးအိအိခန့်တို့မှ သူမရဲ့သားလေး သွင်ဦးဟန်တို့မိသားစုက ခိုင်နှင်းဝေ ဂေဟာကကလေးငယ်များအတွက် နို့မှုန့်ဖိုး(၃)သိန်းကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ “လိုအပ်နေချိန်မှာ လှူဒါန်းပေးလို့ သာဓုသာဓုသာဓု ပါရှင် လိုတိုင်းတ တတိုင်ရပြီး ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ...
ဆီဗီလာကို ရှုံးပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ မန်ယူထွက်ရ